IQuadruple suite ecaleni kwendalo eSanta Cruz
I-Suite ilula kakhulu ngebhedi ephindwe kabini kunye ne-mezzanine enebhedi ezimbini ezingatshatanga kufuphi nemithi kunye negadi, ePousada Fonte do Cajú. Ukuhlala kubekwe imizuzu emibini uhamba ukusuka emlonyeni wePiraquê-açú River, eSanta Cruz de Aracruz. Ixabiso lentengiso ngelixa indawo yokuhlala ihlaziywa.
Ekufikeni kweqela lethu liya kukubonisa indawo yokuhlala, unikezele ngezitshixo kwaye uvumele ukuba wonwabele ixesha lakho eSanta Cruz. Ekupheleni kokuhlala siyabuya ukuze siqhubele isheke. Kwaye ukuba kukho enye into oyifunayo, unokuqhagamshelana nathi ngokulula usebenzisa i-Airbnb.
Ekufikeni kweqela lethu liya kukubonisa indawo yokuhlala, unikezele ngezitshixo kwaye uvumele ukuba wonwabele ixesha lakho eSanta Cruz. Ekupheleni kokuhlala siyabuya ukuze siqhubel…